Shiinaha RB1958 ion qalin bakteeriyada iyo dhaqaaqa-qalajinta Promotion T Shirt warshad iyo saarayaasha | Renbang
Hoodie pullover pullover cad
Daabacaadda Pullover Hoodie
Hoodies Zippered / funaanad
Shaati gacmo dheere ah oo Lapel ah
RB609 suuf khafiif ah oo loo yaqaan 'Hoodie With Cap'
RB906 qoorta wareega qoorta ah ee hoos u dhig garabka dhididka
RB8055 velvet dahab qaro weyn oo surwaal qoorta qoorta ah
RBLS1065 Wareeg Neck Polyester Cotton Long Sleeves Re ...
RB1958 ion lacagta bakteeriyada iyo Shirt Dhiirrigelinta degdegga ah ee Shirt
jeermiska ion qalinka iyo dhaq-dhaqaaqa qalajiyaha ah ee loo yaqaan 'Promotion T Shirt' ayaa aqbala astaanta astaanta ah ee dharka
Magaca Badeecadda :: kor u qaadista funaanadda funaanad cad oo funaanad LOGO ah
Waxyaabaha: 100% cudbi ama maadada TC ayaa la dooran karaa
Tirada Min.Order: 200 kumbuyuutar halkii cabbir iyo midab
Kartida Bixinta: 1000K Cad / Cadad Bil kasta
LOGO CUSTOM :: shaashad xariir ah, daabac, shaabad kulul
Qaabka loo dhaqo :: Mashiinka dhaq
Magaca: RBLS1958 Silver ion antibacterial dhakhso-qalajinta qoorta wareega Gudbinta T Shirt
Waxyaabaha ay ka kooban 100% fiber fiber
Miisaanka garaam: 180g
Midabka: 8 midab
Tiri: 45 (cufnaan)
Qaar ka mid ah Adeegga Gawaarida Gawaarida Stock
sida caadiga ah waxaan leenahay 3-5 nooc oo aan soo saarno sanadaha oo dhan, oo macnaheedu yahay tiro yar sida 100-1000 ama 10000pcs laga yaabee inay leeyihiin keyd, isla markiiba waan diri karnaa mar haddii aan xaqiijinno amarka. sidoo kale waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo midab ah oo cabbirka la doorto, waad nala soo xiriiri kartaa info@renbong.com si aad u hesho macluumaad dheeri ah. sidoo kale ku dar astaanta astaantaada sidoo kale wax dhib ah ma leh.
Ku saabsan Waxyaabaha T Shirt:
Caadi ahaan waxaan dooran doonnaa 100% Waxyaabaha suufka ah waxay soo saaraan hooide, sida 120-300g ect. Xaqiiqdii, Qeyb ka mid ah Macaamiisha ayaa sidoo kale dooran doonta 65% walxaha cudbiga ah oo leh 35% caag, 100% polyester iyo qaar kale oo ka mid ah saamiga lamaanaha kala duwan. iyo sidoo kale waxaa jira waxyaabo qaas ah sida dharka Maroodda Xarka, Dharka Xarkaha dabiiciga ah, Dharka Bamboo iyo wixii la mid ah.
Ku saabsan Midabka Shirt T:
Jaangooyada caadiga ahi waxay leeyihiin sida hoos ku xusan: Caddaan, Madow, Buluug, Buluug madow, Kiriim, Jaale, Gery, Madow Gery, bunni iyo wixii la mid ah. haddii aad u baahatid Custom the Color si wadarta tirada ay u baahan tahay ka sareyso 1000pcs, haddii ay ka hooseyso 10000pcs waxaan ku siin karnaa shaxda midabkeenna xulashada, waxaan u maleynayaa inay midabkaaga ku yeelan doonaan shaxda midabkeena.
Ku saabsan Xajmiga T Shirt:
waxaan bixin karnaa heerka Ingiriiska, Mareykanka iyo Aasiya. laakiin sida ugu fiican ayaa ah macaamilku inuu kuugu soo diro cabirka caadiga ah naftaada. waxaad konw dadka cabirkiisu ka duwan yahay Wadan kala duwan.
Brand LOGO shaarka funaanadda:
Teknolojiyada Daabacaadda: Daabacaadda shaashadda xariirta, Daabacaadda Rubber, Daabacaadda Dijital ah ee Tooska ah, Daabacaadda daabacan ee 3D. Daabacaadda wareejinta kuleylka, Daabacaadda Sublimation.
Kuubbashada Kulul: Ku-shaabadaynta Dahabka Dahabka ah / Ku-shaabadaynta Xajmiga Lacagta / Ku-shaandheynta kulul ee Fabric
Teknoolojiyadda Soodhaweynta: Caadiga caadiga ah, Tuwaalka Tuwaalka, Applique Embroidery, Sequin Embroidery, Dib Loogu Noqon karo Sequin Embroidery IWM. sidaas darteed waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo ah Astaanta Calaamadaha hoodie.
Ku saabsan calaamadda dharka:
Bixi calaamadda Neck Label.sleeve, calaamadda hoose, calaamadda kaarka, calaamadda gacanta iwm waxaan sidoo kale bixin karnaa calaamadda u gaarka ah.
Xirmada T Shirt:
badankoodu waa 1pcs / hal boorso poly, 20-50pcs oo ku jira sanduuqa kartoonka.
Tiro yar ayaa u rari kara shirkad dhakhli leh sida DHL, UPS, Fedex, SF express iyo wixii la mid ah. Tiro badan ayaa lagu rari karaa Badda, laakiin haddii waqtigu yahay mid deg deg ah oo looga dhoofiyo garoonka diyaaradaha.
1. waxaan soo bandhigi karnaa talo soo jeedin badan ama talo macquul ah si loo xaqiijiyo hoodie si waqtiga loo ilaaliyo.
2. Kormeer adag si loo hubiyo tayada shey kasta inta aan la xirin.
3. Saxeex heshiis qarsoodi ah oo ku saabsan nashqadeeyaha hoodies cusub ama macluumaadka kale ee ganacsiga.
4. dhammaan dharkayagu waa amarka OEM, amar yar ayaa sidoo kale la soo dhaweynayaa.
Hore: RBLS100 polyester wareega qoorta gacmo gaaban kor u qaadista funaanadda T
Xiga: RBSS-2250 Labada midab ee midabkeedu yahay TC Polo T Shirt-ga oo dhaqso u qalajiya
Naqshad Shirt ah
RBLS1960 Ogata si dhakhso leh u qalajinta funaanadda T
RB512 khafiif ah saddex-bar hoodie collar taagan la z ...
RBLS8066 qaro weyn oo dahab lagu xardhay oo jilicsan oo buluug ah ...
RBLS7718 Shirt Polo Gacmo Dheer
RBLS1019 Dhiirrigelinta dhabta dhabta ee qalajinta Polo Shirt
Telefoonka: 0086-579 86699003
Cinwaanka: 1F 3TH Cutubka 39 Dhismaha Shitatou Jiangdong Street Yiwu City Zhejiang China
Isniinta-Jimcaha: 08AM ilaa 05PM
Sabti-SUN: 09AM ilaa 04PM